Home Wararka Fowsiyo Y. Xaaji oo guri ka iibsatay Nairobi xili ay sheeganayso inay...
Fowsiyo Y. Xaaji oo guri ka iibsatay Nairobi xili ay sheeganayso inay dagaal la gashay Kenya
Xildhibaan Fowsiya Yusuf Xaaji Aadan oo horay u soo qabatay jagada Wasiirka Arimaha Dibadda iyo Ra’iisal Wasaare Ku Xigeen ayaa sadax bilood ka hor waxa ay guri weyn ka iibsatay xaafada Hurlingham ee ku taal Bartamaha magaalada Nairobi.
Gurigaan oo ay lacagtiisa si buuxda oo (cash) ah ay ku bixisay ayaa lagu qiimeeyay malaayiin lacagta Kenyaan ah. Hadii aad u baahan yahay booqo Kenya deeds/land registerton site.
Xildhibaan Fowsiya ayaa ku doodaysa inay dagaal ku qaaday dowlada Kenya iyo hogaankeeda si ay u soo dhiciso badda Soomaaliya. Sidee ay suuragal ku tahay in lacagtii laga dhacay shacabka Soomaaliyeed ay ku maalgashato Kenya iyada oo ay colaad kala dhaxeeyso Kenya.
Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa dad aan qadiyad lahaynin oo ay Daacadnimada ka fog tahay. Soomaaliya hadii ayan helin hogaan Cusub oo dareen wadaniyad leh dalkaan waa loo baqaa!